Chii chinofanira kuchengetwa mupfungwa paunenge uchivaka zvakakosha kumashure kwekuita kwepamusoro SEO?
Hapana chikonzero chekutaura kuti chivakwa chakakosha kumashure kwe SEO nzira yakarurama ine zvimwe zvinhu zvakavanzika zvinofanira kuchengetwa mupfungwa nemunhu wese webmaster nemudzidzi wepaiti. Icho ichokwadi, kunyanya nokuti iyo yose nzira yekusika zvakakwana zvakakosha backlinks dzisingambofi dzakakuvadza nzvimbo yako dzine maitiro akawanda uye nhengo. Uyewo kakawanda kuchengeta kurega kuisa zvinhu zvinhu zvinoratidza kuti zvakaoma zvikuru kupfuura vazhinji vedu tingafunga. Ndicho chikonzero pasi apa ndichaenda kuzokuratidza dzimwe dzenguva dzinowanzoitika pamusoro pekuvakwa kwehudhi hwehuhu. Ziva chii chinofanirwa kudziviswa pamutengo wose - kana kuti zvigadziriswa nokukurumidza zvakakodzera paunozviona pawebsite yako kana blog. Ndinoreva kuti chimwe chezvikanganiso zvinotevera zvinogona kushandura zviri nyore kunyange zvakakosha zvakakonzera kumashure kunzvimbo isina chazvinobatsira yejunk - inenge pasina nguva - free auto appraisals. Chii chinowedzera - kana zvasvika pakunyanyisa, imwe chete "inotyisa" ingano inogona kusinganzwisisi zvinokonzera SEO yako inogara kwenguva refu mukuita kwenguva refu.
Unofanirwa kunge uchitarisa kwenguva pfupi pano. Usabvisa zvikanganiso izvi zvakajeka - kungozvibvunza pachako kana iwe unenge uine zvose zviri munzvimbo, uye iwe webhusaiti yako kana bhutiro yako haichazombobatanidzwi ne:
chero mawebsite kana mabhuku ane rudhi (kwete kureva avo vakatovhiringidzwa kurondedzero yeGoogle);
nheyo dzisingazivikanwi, kana nzvimbo ipi neipi dzine ukama hwemabhizimisi akawanda, zvakadai seupombwe, kubhejera, kana mishonga yepamusoro;
chetatu-mamiriro ezvinhu anotarisa sezvakaita mawebsite, mablogi, kana maforamu asi ane toni dzemashure endangariro dzakasvikako mumaprofayiri awo ega, kana kuti anozvipa kutengesa uye / kana kuchinja.
Zvese zvinofanira kunge zvichitsanangurira kunze uko, sekutsvaga chero ipi zvayo yakangosarudzwa zvingangodaro iwe unogona kukonzera kukanganisa kwekutsvaga kutsvaga kwekutsvaga, panzvimbo yekunakidzwa nekuvandudzika kupi zvayo kunogona kuitika kwehutano hwako SEO pachiyero. Pane imwe nguva taita kunyange zvinhu zvakajeka zvisinganzwisisi pachena, pasi, ndichaenda kunongedzera vamwe vangangodaro vane ngozi asi vachiri kuwanzofungidzira zvikanganiso. Kana iri nyaya yekuvaka zvakakosha kumashure, pano ndizvo zvinowanzouraya mutsara:
Nhema Anchor Text
Usambosarudza kuisa zvinyorwa zvinyorwa pakarepo uye usasashandise nenzira yekupfura-in-the-dark. Ndinokurudzira zvakasimba kufungisisa zvakadzama munyaya yacho, nokuti mabhendi akasimba ezvokutengeserana anotarisa zvakasununguka anogona kunyanya kusimbisa kutendeuka kwako. Ichokwadi chakaipa ndechekuti chakakanganisika zvachose kana kunyange chiri chikamu chakakanganisika zvinyorwa zvinyorwa zvinogona kukuendesa zvakakwana uye zvakakosha kumashure mukonzero chaiyo yekunyorwa kwepamusoro, kana kunyange chirango chebhuku.
Kushandisa zvisina kukodzera Kwakaitwa DoFollow / NoFollow Zvimwe
Sezvakamboita, kunyatsodzidza zvakadzidza. Zvechokwadi, chete DoFollow backlinks inogona chaizvo kugadzirisa zvinodiwa zveSEO panguva yakareba. Panguva imwe chete - kana iwe uchitungamira kana kuti uchingopfurikidza navo - zvose zvichave zvichida kuguma nemigumisiro yakaipa yakafanana.
Kuwedzera kuwedzera kwechikwata
Ngatitsvake - kunyange kana iwe uine mukana wakanaka wekukwanisa kuwana inoshamwaridzana na, haufaniri kumbomhanya-kungoshandisa mikana yose mitsva mumaawa akawanda kana kuti kweusiku. Uye chero kuwedzera kwakakosha - kana kubatanidza uhu kana huwandu - hachisi chinhu chaicho chinofanira kurumbidzwa nacho. Yeuka, kuvaka zvibvumirano zvakakosha zvinogona kukushandira nekusingaperi nekushanda kwavo kwakanaka muSeO - zvose zvinenge zvakaenzana. Usambozeza kuzvibvunza zvakare: Zvinhu zvose zvinotarisa zvakakwana here? Wakambopedza nguva yakawanda uchitsvaga nzvimbo dzakakodzera here? Iwe unonyatsoziva zvose pamusoro pe backlinks zviri munzvimbo uye zvinongogadziriswa chete nechinangwa chakajeka here?